Ciidamada Kenya oo afduubtay dad kale oo ku nool gobalka GEDO. – Bandhiga
Home Ciidamada Kenya oo afduubtay dad kale oo ku nool gobalka GEDO.
Ciidamada Kenya oo afduubtay dad kale oo ku nool gobalka GEDO.
in Ciidamada Kenya oo afduubtay dad kale oo ku nool gobalka GEDO.
Gobalka Gedo oo dhaca Koofurta Soomaaliya ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in markale ciidamada Kenya ee sida gaarka ah u tababaran iney afduubteen dad shacab ah oo ku nool gobalka GEDO.
Dadka ku nool deegaanka Daaru-Salaam oo hoostaga magaalada Ceelwaaq ayaa ayaa sheegay in afar qof oo Soomaali ah ay wateen ciidamada Kenya waxaana ay ahaayeen dad safar ku jiray oo u socda deegaanada kala ah Daarusalam iyoKuntun.
kamid ah dadka ku nool deegaanka Daaru-Salaam oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo “Ragga ay kaxxeysteen Ciidamada Kenya Afar qof oo mootooyin watay ayay ahaayeen,waxaa ay ku socdaalayeen inta u dhaxeysa daaru-salaam iyo Kuntun, mootooyinkii waa ay ka qaateen waana ay wateen”
Dadka ay afduubteen ciidamada Kenya ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdifitaax Xasan Nuur, Cabdullaahi Cali Dhicis, Cabdifitaax Diiriye Qorane iyo Maxamed Ibraahim Afeey.
Ehellada afarta qof ee ciidanka Kenya afduubteen ayaa wada baadi gooob ay ku raadinyaan dadkooda si ay raq iyo ruux midkood ugu helaan.
Dhowaan ayey aheyd markii ciidamada dalka Kenya ay saddex ruux ka wateen duleedka degmada Ceelwaaq, kuwaas oo ay toogasho ku dileen, waxaana falkaasi ka dhashay caro dadweyne iyo dibad-baxyo ka dhacay magaalooyinka gobolka Gedo iyadoo shalay ciidamada Kenya iyo kuwa Dowladda Soomaaliya ay ku dagaalameen xad beenaadka u dhaxeeya Labada dal.